नाना पाटेकरले सञ्जयदत्तसँग किन सँगै फिल्म खेलेनन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
नाना पाटेकरले सञ्जयदत्तसँग किन सँगै फिल्म खेलेनन् ?
बलिउडका क्षेत्रका दुई चर्चित कलाकार नाना पाटेकर र सञ्जयदत्त रिलिज फिल्म होस् वा अन्य समय हरेक टाइम यी दुई कलाकार लाईमलाईटमा हुन्छन, हरेक क्षेत्रमा मिडियामा पनि उत्तिकै स्थान ओगटिरहेका हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस कपिललाई कारबाही हुने
यही कुराकानीमा पाटेकरको अर्काे रहस्य पनि मिडियासामु आए । अहिलेसम्म पनि उनीसँग कुनै काम गर्नुपरेको छैन र आगामी दिनमा पनि कुनै काम गर्नु नपरोस् भनेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस किन खेल्दैनन नाना पाटेकर र सञ्जयदत्त सँगै फिल्म ?